होन्डुरस - जियोफुमाडासमा राजनीतिक स of्कटको अन्य बाध्यता
होन्डुरसमा राजनीतिक स of्कटको अन्य बाध्यता
डिसेम्बर, 2012 राजनीति र लोकतन्त्रको
२०० the त्यो साल हो जहाँ होण्डुरसको नयाँ मोडलिपेशनमा होण्डुरसको राजनैतिक स exp्कट विस्फोट भएको थियो, आंशिक कुपनको विशेषताको साथ, यसलाई संरक्षण गर्ने कानूनको जमानतमा औचित्यसहित; प्रजातन्त्रको शुद्धतम सिद्धान्तहरू भ breaking्ग गर्दै पनि जियोफुमाडस अब १०,००० मासिक आगन्तुक भन्दा बढी छ, तर प्रारम्भिक विचार होण्डुरसमा जन्म भएको थियो, त्यसैले यस मुद्दामा मानव भावनालाई अनलिंक गर्न मलाई गाह्रो छ, यद्यपि मैले यस साइट भित्र एउटा वर्गलाई जबरजस्ती गर्नुपर्दछ जहाँ राजनीतिक विचार मिल्छ। त्यत्ति मात्र हो कि वफादार पाठकहरु हाम्रा देशहरुका समस्याहरु उस्तै उस्तै छन् भनेर जान्दछन्, यस बारेमा मैले भनेको छु धेरै पटक; आज म केवल छोटो विचारहरु मा बचाव गर्न चाहान्छु, के भयो घटनाको बारेमा मैले लेखेको धेरै चीज पछि धेरै कम समाचार छ प्यारागुवा.
र यसैले यो धेरै प्रख्यात छ, म यसलाई त्यतै जान चाहन्छु, बिना ढाँचा, केवल यस समयमा सोचेको कुरा के हो कि मेरो बच्चाहरु संग पैदल बाट फर्केर फर्कनु पर्छ; अब त्यो केटी जो मेरो आँखा रोशनी खुल्ला सडक मा ड्राइभ गर्न हिम्मत गर्छ।
... यदि त्यहाँ कुनै लाभ थियो ...
द्विपक्षीयताको छिटो खण्डन, सबैलाई मान्यता छ भन्ने कुरामा कुनै श doubt्का छैन, यो स of्कटको फाइदा हो, यस्तो प्रक्रिया जसमा छिमेकी देशहरू एल साल्भाडोरमा 75,000 XNUMX,००० भन्दा बढी मृत्यु हुने गर्दछ। अब, ज़ेल्याको आन्दोलनले लिबर्टैड वाई रिफन्डसियान (लिब्रे) को नामले चिनिन्छ उसको मूल पार्टीको चाखलाग्दो प्रतिशत, साथसाथै यस क्षेत्र जसले सधैं वामपन्थी र / वा सुधारवादी विचारहरू साझा गर्दछ।
हामी बुझ्दछौं कि सहभागिता प्रतिशत प्रतिशत अनिश्चित छ, जुन केवल नोभेम्बर 2013 प्राथमिक चुनावको रूपमा चिनिनेछ (यदि तिनीहरू भए - यसैले मेयन संसारको अन्तस्पष्ट गर्नुहोस्-)। तर आन्तरिक चुनाव, जहाँ प्राइमरीहरूका लागि उम्मेदवारहरू परिभाषित छन्, यसले देखाए कि ग्रासरूट निर्माण उनीहरूको शक्ति हो, र धेरै संख्यामा मेयरलिपी र प्रतिनिधिहरू पुग्न सक्ने सम्भाव्यता प्रस्ट छ; के एक उभरती पार्टी कहिल्यै हासिल गर्न सक्दैन। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि लगभग कुनै पनि देशका हरेक आन्दोलनहरू यस्तै सुरु भयो, यद्यपि तिनीहरू सबै समयको अन्तरालमा बाँचेनन्। सुरक्षित -र अन्य यस्तै अनुभवहरूको प्रमाण- तिनीहरू यस समयमा राष्ट्रपतिसम्म पुग्न सक्नेछन्, तर तिनीहरू अनुशासनको असफलता पछि यसलाई प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन्।
हामी यो पनि बुझेका छौं कि यो युरोपका विकसित देशहरूमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद के हो भनेर जान्न, प्रस्तावलाई परिपक्व गर्न, चुनौतिहरूको वर्ष हो र यसलाई दक्षिण अमेरिकी जनवादको हानिकारक चलनहरूबाट शुद्ध पार्छ। यो बुझ्नको लागि अवसर एक असाधारण छ कि एक विश्व कप गोल स्कोर को रूपमा, वा यो सदाको लागि गुमाउनुहोस्।
मलाई यो फोटो मनपर्‍यो, यो नुवे फ्रन्टेरा हो। एउटा शहर जहाँ हामी जानाजानी - हामी स्थानीय नेतृत्वको आधारमा वामपन्थी पार्टीले जितेको मेयरल्टी देख्छौं।
... पीडित र कम लाभ ...
यी देशहरूमा विकास र आत्म-स्थिरता को पक्षमा neophytes छन्; हामी के गर्न सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो मर्यादा संग पहिचान छ। लोकतन्त्र कि अन्य देशहरूमा cavemen जस्तो अभ्यासहरू बाहिर त नाजुक छ, तर यो महादेशमा धेरै अझै पनि विकल्प थप क्षति रोक्न र लगभग सधैं खराब सफाइ।
त्यसोभए, अर्थतन्त्र र व्यक्तित्वलाई नोकिया अपरिहार्य छ। विकल्पहरू उपलब्ध छ, फिक्री बस्ने बच्न देश छोड्ने, र ती जो असुरक्षा को संकट बन्द छन् रहने भएका धेरै संयुक्त राज्य अमेरिका संग कोलम्बिया जडान कि गलियारे मा जटिल भएको छ।
यो स्वीकार्न गाह्रो तर वास्तविक पनि छ कि हामी सबै विश्वस्त छौं कि हाम्रा वर्तमान राजनीतिज्ञहरू अगाडि बढ्न सक्षम छैनन्। त्यसैले द्विपक्षीय रुपमा भुईं सार्नु महत्वपूर्ण कदम हो, कम्तिमा नयाँ लोकतन्त्रमा नयाँ काम गर्ने ठाउँमा।
जब मैले यो फोटो बनाएको छु, मैले कहिल्यै कल्पना गरेन कि यो हाम्रो देशको राजनीतिको भ्रामक परिदृश्यको प्रतिनिधि हुनेछ।
... बाकीसँग के हुन्छ ...
त्यहाँ एक सन्तुलन रहेको छ जुन बायाँका विचारहरूसँग सहमत छैन र सबैभन्दा रूढीवादी क्षेत्रमा रहन्छ। र अर्को समूहले बुझ्दछ कि हामीसँग अहिले जे छ त्यो पर्याप्त छैन, तर नयाँ लहरमा डुबुल्काउन प्रमाण चाहिन्छ। यस अन्तिम समूहको सब भन्दा ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक वर्गलाई बेवास्ता गर्नु र त्यसलाई अगाध खाडलमा छोड्नु हो, केही उदासीनता, थकान र यसले गर्दा कि तिनीहरू जीवनमा महत्त्वपूर्ण चीजहरूमा व्यस्त छन् जुन राजनीतिक सर्कस पोडहरूले बर्बाद गर्न सक्दछ।
यसै बीचमा, राजनीतिक वर्गमा राजनीतिक एजेन्डामा सुधारहरू अब जरुरी भइरहेका छन्, हामी सबैले बुझेका थियौं तर यी देशहरूमा विधायिका प्राय: प्रतिक्रियावादी हुन्छन्। इरान्ड चोरी गर्नका लागि प्रख्यातता भनेको यो एक कोलिजियम हो, एक भन्दा बढी उच्चारण गरीन्छ उनीहरूले झुकाएको प्लेनलाई पत्ता लगाएझैं गरी, जबकि सम्पूर्ण पुस्तकहरू यस सन्दर्भमा लेखिएका छन्। यी विश्व प्रवृत्तिहरू कसरी छन् भनेर जानेर, हामी जान्दछौं कि होन्डुरसमा निम्न सुधारहरू जनताको शक्तिमा आधारित छ; जे भए पनि बुझ्ने "कुन शक्ति" र "कुन मानिस" ले विशेष पढाइ ओगटेको छ, खुलापन र सहिष्णुताको सट्टा।
अन्त मा, राजनीति यदि एक अध्ययन हो भने राजनीति हो, तर यदि एक कला को अभ्यास गरिन्छ।
नागरिकको सहभागिताका लागि उत्तम सर्तहरू, एक दक्ष राज्य, राजनीतिक संरक्षण संरक्षण, दीर्घकालीन योजनाहरूको निरन्तर प्रक्रिया; केही चुनौतीहरू हुन्। अहिलेको लागि हामी प्रजातान्त्रिक स of्कटको दलदलले घेरिएका छौं, जसबाट हामी उदय हुनेछौं, यदि यसले हामीलाई सामाजिक उथलपुथल पनि खर्च गर्नुपर्दछ जुन अन्तत: आवश्यक छ। राजनीतिमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूले गरेका पहलहरू हेरेर, जसले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको प्रस्ताव वा प्रक्षेपण गर्छन् राम्रो संकेत हो। ल्याटिन अमेरिकी प्रस showing्गले यो देखाउँदैछ कि यो अगाडि बढ्न सम्भव छ र यसको लागि भावशून्यताको साथ तोड्न आवश्यक छ।
यदि तपाईंको योजनाहरू होन्डुरसमा आउने हो भने आउनुहोस्। कुनै पनि मेसोमेरिकन देशमा जस्तै सावधान रहनुहोस्, तर यस क्षेत्रको सांस्कृतिक मूल्य जान्ने अवसरलाई नबिर्सनुहोस्, म्यान सभ्यताको विरासत कोपेन भन्ने केन्द्रबिन्दुमा केन्द्रित थियो, कोरल चट्टानहरू, स्वादको रूपमा, ग्यास्ट्रोनोमी र प्रकृति भित्र रहेको। । प्रेसले भनेको भन्दा आधा विश्वास गर्नुहोस्, र साहसको मजा लिनुहोस् जस्तो कि यो चरम खेल हो।
यो मेरो अन्तिम फोटोहरू मध्ये एक हो। Gualcinse को नगरपालिका महल बाट प्रभावशाली दृश्य, पृष्ठभूमि मा तपाईं साल्भादोरन भूमिहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अग्रभागमा एक रक टीला जसको स्तरीकरण सपाट समाप्तको लागि उपयुक्त छ।
... हामी 2013 बाट के आशा गर्न सक्छौं ...
संग हालका बैठकहरू Aureliano Buendía तिनीहरूले मेरो स्थानमा केही शंका गरे। ESRI अनुप्रयोगहरू आईप्याडका लागि के सोचिरहेको हुन सक्छ वा भविष्यमा AutoCAD २०१ new मा के लेखिएको छ भनेर भविष्यवाणी गर्न मलाई सजिलो छ, जुन हामी एक लेखको लागि योग्य छौं। तर यसमा, यी केवल मेरा अनुमानहरू हुन्:
२०१ 2013 डरलाग्दो प्रजातान्त्रिक संकटको वर्ष हुनेछ। यसले सत्य आयोगको रिपोर्टलाई सन्दर्भ पुस्तिका र कानुनी स्थापना प्याचको पाना बनाउनेछ।
त्यहाँ कुनै चुनाव छ कि कुनै चुनाव छैन र त्यो घटनाले उनीहरूलाई विशेष परिस्थितिमा स्थगित गर्छ।
आबादी अर्को कारावास सहन सक्नेछैन, र सडकमा मार्च भन्दा बाहिरको सर्वश्रेष्ठ डिफेन्डर हुनेछ।
हामी मध्येका आशावादीहरुका लागि यो उत्तम वर्ष हो। तर तपाई होशियार हुनुपर्छ।
नर्वस समस्या भएकाहरूका लागि यो मिडियालाई ध्यान दिएर सुनेको बर्ष हुनेछ। बिहान तिनीहरू दाहिने पट्टि, दिउँसो ती बायाँ तिर। सुन्न नसक्ने विचार ... शुतुरमुर्गको लागि मात्र स्वस्थ छ।
तपाईं जो ख्याल राख्नुहुन्न, उठ्नुहोस् र एक स्ट्यान्ड लिनुहोस्। यो कुन एक फरक पर्दैन।
... ठूलो भाइ ...
जब म years बर्षको थिएँ, मलाई याद आयो कि मलाई हावामा शीर्ष नाच गर्न र मेरो हातको हत्केलामा लिनका निम्ति कत्ति गाह्रो भयो। मैले एक, अर्को, अर्को प्रयास गरें र मेरो दाइको सिफारिसहरू बेकार थियो। जब उसको धैर्यता समाप्त भयो उसले मलाई भन्यो:
-इन्सन्स, मलाई स्पिन दिनुहोस्।
उसले यो3पटक नाच्यो जसले मलाई यो देखाउँदछ कि यो उसको प्राकृतिक क्षमतामा गर्न सम्भव छ। तब उसले केहि दिनको लागि यसलाई झिक्नेछ र मलाई भन्यो कि म यसलाई आफ्नो कपालमा राख्छु, यसलाई निधारमा प्वाल राख्नबाट रोक्न।
यो मलाई बताउने एक दिलचस्प तरीका थियो कि मैले यसलाई असहायको रूपमा लिई।
- यो टाढा छैन वा कि केहि बुबा भाइले हामीलाई अपरिहार्यताबाट माथि हटाउछ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो संसारको अन्त्य 2012 के हो यदि म्यान्स सही थियो भने?
अर्को पोस्ट 10 + प्रभावको प्रभाव भू-स्थानिय वातावरणमा खाताहरू छन्अर्को »
२ "होन्डुरसमा राजनीतिक स of्कटको अन्य दायित्वहरू" लाई जवाफ
सादर जोर्ज। तपाईको शुभकामना को लागी धन्यवाद
जर्ज विल्लिया भन्छिन्:
भाइ मैले आफ्नो शब्दहरु लाई हाम्रो देशहरुमा राजनीतिक संकट संग पूर्ण रूप देखि साझा गर्छन, म वास्तव मा सोचता हूं कि धेरै अराजकता र मान्छे को निराशा को खेलिन्छ। म आशा गर्दछु कि भेनेजुएला जस्तै होन्डुरस, चाँडै नै वा पछि नै एक साँच्चै लोकतान्त्रिक वातावरणमा प्रगतिको बाटो लिनेछ।